Tetikasa Fihariana-IFC: miofana ny aorian’ny krizy Covid-19 ny orinasa | NewsMada
Miisa 359 ny orinasa nahazo fampindramam-bola tamin’ny fandaharanasa Fihariana, ao anatin’ilay tolotra Miarina. Misehatra amin’ny tolotrasa na servisy ireo, misy koa amin’ny fizahantany, ny fitaterana, ny fambolena, sns. Kely ny zana-bola (7% isan-taona) raha oharina amin’ny mahazatra eny amin’ny banky. Antony, tosika omena ny orinasa hiatrehana ny fanarenana ny orinasa nisedra olana amin’izao krizy Covid-19 izao. Manampy izany, miara-miombon’antoka ny Fihariana sy ny Sampandraharaha ara-bola iraisam-pirenena ao amin’ny Banky iraisam-pirenena (IFC), hanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo orinasa nisitraka ny tolotra Miarina avy amin’ny Fihariana. Mamolavola ny fiofanana ny IFC.
Fototry ny toekarena ny PME
Nilaza ny sekretera mpanatanteraka ny Fihariana, Rtoa Zafindravaka Valérie, fa miompana amin’ny fitantanana orinasa ny fiofanana, fikarohana lalam-barotra, ny fanovana ny paikady manoloana ny krizy, sns.
Nambaran-dRtoa Marcelle Ayo, solontenan’ny IFC eto Madagasikara, fa fototra mampihodina ny fihariana toekarena eto amin’ny firenena ny orinasa madinika sy salantsalany (PME). Ilaina tokoa ity fiofanana ity ahafahan’izy ireo miatrika ny krizy Covid-19 hanarenana ny firenena. Ao anatin’izany ny hanatsarana ny fahalalan’izy ireo ny lafiny famatsiam-bola sy ny fahaizana mampiasa ny teknolojia vaovao, ohatra.